🥇 ▷ Windows 10 dib ayaa loogala soo kaban karaa daruurtii ✅
Windows 10 dib ayaa loogala soo kaban karaa daruurtii
Windows waxay ku dhowdahay inay siidaayaan xulasho ay Apple ka hirgalisay Macsyadooda sanado. Markii la siidaayay nooca cusub ee 18970 kuwa ku jira barnaamijka barnaamijka ‘Windows Insider’, Microsoft ayaa suurtagelisay suurtagalnimada ku rakib Windows 10 daruurta.
Waxa kor ku xusan micnaheedu waa uma baahnid inaad abuurto USB si aad u sameysid rakibo eber, sidii ay wax u qabanaysay in muddo ah hadda. The Dhis 18970 (20H1) ku dar ikhtiyaar Ka soo degso daruuraha si menu Dib u dejinta PC. Isticmaalayaasha ayaa dib u soo cusbooneysiin kara isla noocaas iyo daabacaaddii ay hadda ku rakibeen kumbuyuutarkooda.
Waxaa jira faahfaahinta qaar si looga fiirsado muuqaalkan cusub. Bilowga ma aha in lagu jahwareero ikhtiyaarka “Ka soo kabso daruur” oo laga heli jiray qaar ka mid ah noocyadii hore ee Windows 10. Sidoo kale ma bixiso rakibaadda astaamaha ikhtiyaariga ah, maadaama ay khalad ku ridi karaan soo dejinta.
Microsoft waxay cadeyneysaa Windows 10 ayaa soo dejisan doona isla markaana rakibi doona nooca iyo daabacaadda uu adeegsaduhu hadda ku haysto kombiyuutarkiisar, oo ka duwan macOS, oo rakibay nooca ugu dambeeyay nidaamka qalliinka Apple.
Ugu dambeyntiina, rakibidda Windows 10 ee daruurta waxay ubaahantahay ilaa 4 GB, marka waa lama huraan leeyihiin xiriir deggan si aad awood ugu yeelatid inaad kombiyuutarka dib uga bilowdo xoqidda.
Moodeel cusub oo loogu talagalay kombuyuutarrada 2-in-1 ah
Nooca cusub ee 18970 wuxuu sidoo kale bixiyaa qaab kiniiniga cusub ah. Microsoft dib u cusboonaysiiyay interface ah si ay uga dhigto mid la jaan qaada PC mode. Haddii aad leedahay 2-in-1 qalab oo aad ka goyso shaashadda, waad arki doontaa taas Astaamaha hawsha ayaa kala fog baarka baaristana waa burburay. Bogagga Internetka ee loo yaqaan “Explorer of Windows” Waxaa sidoo kale loogu wanaajiyay shaashadaha taabashada iyo furaha si otomaatig ah ayaa loo shaqeynayaa markii aan la falgalno santuuqa qoraalka.
Kala xulashooyinkaani waa waxaa laga heli karaa giraanta dhakhsaha leh ee Windows Insider. Kuwa qayb ka ah “Skip Ahead” ayaa marka hore heli doona Dhismaha 18970 ka dibna cusboonaysiinta isugeynta ah ee 18970.1005 (KB4518974).
Sidii la filaayay, noocyadan Windows 10 Iyagu waa imtixaan waxayna wataan cilado qaar, sidaa darteed laguma talinayo kooxdaada guud.